Kalenda Funfair - Thrilltalk.com
You na-achọsi ike ma ọ bụrụ na a ga-enwe ikpe ziri ezi na mpaghara gị n'oge na-adịghị anya? Na Nkechi kalenda ziri ezi ị gaghị agbaghara ngosi ọ bụla ọzọ. N'ime ngwa ọrụ dị n'okpuru ị nwere ike ịhọrọ fairs kwa izu, kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ. I nwekwara ike chọọ site na aha obodo.
N'ihi ọnọdụ dị ugbu a banyere nje Corona kwụrụ ọtụtụ fairs na mkpọpu kposara. O nwere ike ịbụ na enwere akwụkwọ ngosi na ndepụta a na-agaghịzi ewere ọnọdụ ma ọ bụ na akwagala ebe ọzọ. Anyị na-eme ike anyị niile iji debe ndepụta a dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na ị zutere njehie, biko mee ka anyị mara site na ụdị kọntaktị ma ọ bụ zitere anyị ozi na anyị Ibe Facebook